Ngaba izicoci zomoya ziyasebenza ngokwenene?
Umgangatho womoya ophahleni
Mhlawumbi une-allergies. Mhlawumbi ufumene izaziso ezininzi zokutyhala malunga nomgangatho womoya kwindawo yakho. Mhlawumbi uvile ukuba inokunceda ukuthintela ukusasazeka kwe-COVID-19. Nokuba siyintoni na isizathu sakho, ucinga ngokufumana umoyaumcoci, kodwa nzulu emazantsi, awunakuzibuza: Yenza umoya izicociUmsebenzi? Bathembisa ukuba baya kucoca uthuli, umungu, umsi, kunye neentsholongwane, kodwa ngaba bayayinyusa loo nto, okanye ngaba ngabalandeli nje abangaphezulu kwexabiso?
Isicoci somoya esenzelwe ukuphucula umgangatho womoya kwigumbi elinye. I-EPA kunye noogqirha abaninzi bayavuma ukuba izixhobo zokucoca umoya ziluncedo. Ngokukodwa ukuba ungcoliseko lwangaphandle luphezulu, okanye ukuba kuyabanda ukuphosa iifestile zakho kwaye ungene kwiitoni zomoya omtsha.
“Amaconsi wentsholongwane, njenge-SarsCoV2 kunye nomkhuhlane, ezi zinokuhlala zimisiwe emoyeni kangangeeyure, ngoko ke isihluzi somoya asinakukhathaza, kodwa khumbula ukuba amathontsi nawo angahlala phezu komhlaba kwaye uhlale apho,” ucacisa uGqirha Elliott. Into yokucoca umoya akufuneki ithathe indawo yokunxiba imaski, ukuhlamba izandla, ukuhlala wedwa, ukungabelani nabanye ngeemveliso zakho nokucoca. ” Njengoko i-CDC isitsho, qwalasela indawo yokungenisa umoya "yesicwangciso esiliqili" sokuthintela ukusasazeka kwe-coronavirus.
Ke zeziphi iintlobo zokucoca umoya ekufuneka sizikhethile kwaye siziphephe?
Ezinye iintlobo ze izinto zokucoca umoya, ngokukodwa iijenereyitha ze-ozone zikhupha i-ozone ngexesha lokucoca. I-ozone yirhasi engenambala, inetyhefu kwaye ingazinzanga eneeathom zeoksijini ezintathu kwimolekyuli nganye. Irhasi ivela ngokwendalo kwiatmosfera ephezulu, kodwa ikwayinto eqhelekileyo yomsi owenziwe ngumntu. I-ozone evelisa izinto zokucoca umoya ngabom zikhupha irhasi ye-ozone njengesicwangciso sokuphelisa iintsholongwane kunye neekhemikhali ezisemoyeni. I-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo eCalifornia ithi ukubonakaliswa kwe-ozone kuyingozi kwiiseli kwimiphunga nakwindlela yomoya. Iziphumo ebezingalindelekanga zokuvezwa kwerhasi zinokubandakanya ukuphefumla kancinci, ukukhohlela kunye nokuxinana kwesifuba. Izigulana ezine-asthma okanye ezinye iimeko zempilo esele zikho zinokuba neempawu eziqinisiweyo zezo meko ngenxa yokuvezwa yi-ozone.
Ngaba kungcono ukuba ukhethe isicoci somoya esisebenzisa isihluzi somoya semithombo yeendaba?
Ngokusisiseko, uninzi lwezinto zokucoca ulwelo zisebenzisa icebo lokucoca ulwelo-okanye indibaniselwano yeefilitha kunye nokukhanya kwe-UV- ukususa ukungcola nongcoliseko lomoya. Ziyilelwe ukuphucula umgangatho womoya kwigumbi elinye. Nangona kunjalo, uninzi lwezixhobo zokucoca umoya zixhomekeke ekusetyenzisweni kweefilitha ezilahlayo, ezinokubuyiselwa, oko kuthetha ukuba kufuneka uchithe naphi na phakathi kwe- $ 30 kunye ne- $ 200 ngonyaka kwizicoci ezintsha. Ukuba awutshintshi isihluzi somcoci rhoqo, isihluzi asisebenzi ngokukuko. Kwiimodeli zokucoca ezisebenzisa izikhongozeli ezinokusetyenziswa kwakhona okanye iipleyiti ukuqokelela ukungcola, kuya kufuneka ucoca la macandelo ngamaxesha athile. Ngelixa ukugcina ezi ntlobo zokugqibela zokucoca izinto kungabizi kakhulu, kukwanomsebenzi omkhulu. Ukungatshintshi nokucoca izihluzo ngexesha elinokubangela ukonyuka komgangatho womoya ekhayeni lakho okanye eofisini. Izinto zokucoca umoya ezicocekileyo ze-HEPA azisusi nevumba, imichiza okanye ukutsha. Ezi zizinto ezincinci kunezingxobo ze-0.3-micron kwisihluzi se-HEPA. Ke ngoko izinto ezicocekileyo zokucoca i-HEPA zinenqanaba elithile lezinto ezisekwe kwikhabhoni zokufumana ivumba kunye neekhemikhali ezingazukubanjwa yinto ye-HEPA uqobo.
Ngaba ikhona Ucoceko lomoya oluchanekileyo, engasebenzisi icebo lokucoca ulwelo kwaye usahambisa iziphumo zokucoca umoya?
Yonke imihla, amashishini athemba iAirwoods ukunceda ukukhusela umoya wangaphakathi kubathengi nakubasebenzi. I-Airwoods yamkela itekhnoloji yonyango yokuhlanjululwa kweentsholongwane. Ukususa ngokufanelekileyo ivumba, umsi, inkungu, umungu, uthuli, ii-VOCs, ibhaktiriya, intsholongwane, njl njl .Zilungele ikhaya, iofisi, isikolo kunye neendawo zonyango.
Itekhnoloji yoPhuculo lweMolekyuli ePhambili:
Xa umoya ongcolileyo ungena kwicandelo eliphambili le- Ukuqhekeza itekhnoloji yokucoceka, ii-ion ezomeleleyo eziveliswa ziimpembelelo zamandla e-ultra element kwiimpembelelo zecandelo lezinto ezinobunzima beemolekyuli zezinto ezingcolisayo, ezibangela ukuba i-CC kunye ne-CH bond zenze iibhondi zeemolekyuli zezona ntsholongwane ziyingozi kakhulu kwaye iigesi ziyaphuka, ke iintsholongwane eziyingozi ziyabulawa njengoko i-DNA yabo itshatyalalisiwe kwaye iigesi eziyingozi ezinje ngeFormaldehyde (HCHO) kunye neBenzene (C6H6) ziqhekekile zaya kwi-CO2 kunye ne-H2O. Bulala iintsholongwane kunye nentsholongwane ngezinga lokubulala iintsholongwane ngaphezulu kwama-99%. Ngokufanelekileyo ukubola kwenicotine kunye nokujongela phantsi ukungcola komsi okukhoyo.
Isidingo sokucoca umoya kwiAirwoods kwishishini asikaze sibe sikhulu. Eyethuisicoci utshabalalisa olona luhlu lubanzi lokungcola, kubandakanya intsholongwane, ibhaktiriya, ukungunda, i-allergen, kunye neekhemikhali. Ngobuchwephesha bethu bokuqhekeka kweemolekyuli, sikulungele ukujongana nengxaki yanamhlanje yangaphakathi yomoya. Cofa kwikhonkco elingezantsi ukukhuphela ikhathalogu. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya ngemveliso.
Ukusukela ngo-2007, iAirwoods ezinikele ukubonelela nge-hvac ebanzi, igumbi elicocekileyo kunye nezisombululo zonyango lwe-VOC kumashishini ahlukeneyo. Sijonge ukuhambisa umgangatho wokwakha umoya kwihlabathi ngeemveliso ezonga amandla, izisombululo ezilungiselelwe, amaxabiso angabizi mali kunye neenkonzo ezintle.
Igumbi lama-2101, iZiko eliKomkhulu loKwakha uNombolo 25, iTian An Hi-Tech Ecological Park, No. 555 Panyu Ave, Isithili sasePanyu, eGuangzhou, China